Wasiirka difaaca dalka Iraq oo ka badbaaday dil – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka difaaca dalka Iraq oo ka badbaaday dil
starfmke August 9, 2016
Wasiirka wasaarada difaaca dalka Iraq Khalid al-Obeidi ayaa waxa u ka badbaaday isku day dil ah xili u socdal ku maraayay deeganada dhaca waqoyiga dalkaas.
Gaari u wartay wasiirka ayaa waxa lala eegtay madaafic xili u booqasho oo u kormeer kaga sameynaayay xaruumaha militariga ee kuyaala waqoyi waddankaasi ay uga socotay waxana sidaasi lagu sheegay warbixin la soo dhigay Websiteka wasaarada difaaaca ee dalka Iraq.
Ilaa iyo hadda wali lama soo tabinin cid wax ku noqotay werarkaasi lagu qaaday wasiirka iyado oo u wasiirka qudhisana ka badbaaday dilka loo maleegay oo aysan islamarkaasina waxyeelo kasoo gaarin.
Ma jirto cid sheegatay werarka lagu qaaday wasiirka iyado oo ay warbaahinta dalka Iraq sheegayan in laga yaabo weerarkaas in ay geeysten dagaalyahanada kooxda daacish.
Obeidi ayaa lagu wada in loo qaado codka kalsoonida ah kadib marki u afhaayenka aqalka barlamaanka iyo dhowr xildhibaan u ku eedeeyay fal musuq maasuq.
Wasiirka ayaa waxa horey loogu yeeray aqalka barlaamanka 1-da biisha August si uu uga jawaabo eedeymaha musuq maasuq ee u sheegay isago isla markaasina laga doonaayay in u cadeymaha uu u hayo u horkeeno barlamaanka.
Kulankaas oo u wasiirka ku hortagay mudanayaasha aqalka barlamaanka ayaa waxa u ahaa mid ay albaabada u xirnaayen iyadoo oo u wasiirka eedeyn kulul uu u jeediyay afhaayenka aqalka barlamaanka Salim al-Juburi iyo shan mudane oo kale kuwaas oo kamid ah sharci dajiyaasha waddanka Iraq oo ay kamid tahay haweeneyda lagu magacaabo Nasayif oo u sheegay in ay dhamaantood ay ku wada dhaqaaqen fal musuq maasuq.
← Booliska oo dib u helay gaari laga xaday xaaska Peter keneth
Wasiirka wasaarada arrimaha dibadda shiinaha oo ay booqasho dalka uga bilaabaneyso →